दयाहाङ राईबारे कसैलाई थाहा नभएका रोचक कुराहरु - हे'र्नुहोस भिडियो -
Homeसमाचारदयाहाङ राईबारे कसैलाई थाहा नभएका रोचक कुराहरु – हे’र्नुहोस भिडियो
दयाहाङ राईबारे कसैलाई थाहा नभएका रोचक कुराहरु – हे’र्नुहोस भिडियो
May 5, 2021 admin समाचार 347
नेपाली च’लचित्र क्षेत्रमा छुट्टै नाम र पहिचान ब’नाउन सफल नाम हो दयाहाङ राई, जसका हरेक फि’ल्महरु हेर्न दर्शकहरु पर्खेर बसेका हुन्छन | एउटा यस्तो पनि बेला थियो, जुन बखत दयाहाङ राईको नामले मात्र पनि दर्श’कलाई हलसम्म डोहो¥याउँथ्यो ।
निसन्देहः रंगमञ्चको धरा’तलबाट आएका उनी नेपाली सिने’माका उम्दा अभिनेता हुन् । चिम्सा आँखा, बटुलो अनुहार, खस्रो छाला, मझौला ज्यान अर्थात मंगोल वर्णका दया’हाङ भोजपुरको खावा गाउँमा जन्मिएका हुन्, २०३७ सालमा । झन्डै डेढ दशकअघि ‘अनागरिक’ फिल्मबाट सिनेमाको दुनियाँमा प्रवेश गरेका दया’हाङ राई रंगमञ्च पृष्ठभूमिबाट आएका अ’भिनेता हुन्।
पन्ध्र वर्षको अवधि’मा उनले करिब चालीस फिल्ममा अभि’नय गरिसकेका छन्। तीमध्ये ‘सेतो सूर्य’, ‘तान्द्रो’, ‘लुट’, ‘दासढुंगा’, ‘टल’कजंग भर्सेस टुल्के’, ‘स्वाभिमान’, ‘कबड्डी’ शृंखलामा उनको अभिनयलाई विशेष मन पराइ’एको छ। साना-ठूला, सकारात्मक-नकारा’त्मक सबै खालका भूमिका निर्वाह गर्दै आएका उनी विगत एक दशकदेखि च’र्चाको केन्द्रमा छन्।
February 23, 2021 admin समाचार 1725
सञ्चारकर्मी रवि लामिछा’नेलगायतको संलग्नतामा नयाँ टेलिभिजन सञ्चा’लनमा आउने भएको छ । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी लामिछानेले ‘ग्यालेक्सी फोरके’ टेलिभिजन च्यानल शुभारम्भको घोषणा गरेका हुन् । सो टेलिभि’जन नेपालमै पहिलो फोरके प्रविधिमा आधारित भएको लामि’छानेले
October 19, 2020 admin समाचार 5657
March 5, 2021 admin समाचार 1548
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (168979)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (168390)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (166163)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (164087)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (158679)